Mpandeha fanahy: fanozonana ny mpamosavy Cypress, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
Mpandeha fanahy: fanozonana ny mpamosavy Cypress, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ireo tovolahy avy amin'ny G5 dia ireo ihany no manolotra antsika lalao an-tsary toy ny taloha, na dia misy fikitihana hafa noho ny taloha aza. Ora vitsy lasa izay, namoaka lahatsoratra iray hafa izay noresahiko aho fitsangatsanganana an-tsary toy ny taloha, Thimbleweed Park, amin'ny endrika Maniac Mansion madio indrindra, Monkey Island, ilay Larry saga. Ny mpamorona G5 dia manome antsika làlana an'habakabaka mitovy amin'izany, nefa tsy manolotra anay ny fotony mitovy, fa hoy ny fitenenana hoe: raha tsy misy mofo dia mofomamy tsara izy ireo. Ity developer ity dia manolotra fampiharana be dia be amin'ity karazana ity, mifantoka amin'ny mistery avokoa izy rehetra. Androany isika dia miresaka momba ny Spirit Walkers: The Curse of the Cypress Witch, fampiharana iray izay Manana ny vidiny mahazatra 6,99 euro fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Amin'ny mpandeha fanahy: fanozonana ny mpamosavy Cypress hitantsika ny tantaran'ny nofinofin'ny mpandeha an-tany izay manafika sy monina any anaty ala. Nanomboka nanao fikarohana sy fialamboly i Marylyn sy ny vondrona namana iray, saingy sarotra ny dia rehefa voan'ny ratra ny iray amin'ireo namana, satria raha te velona izy ireo dia tsy maintsy mandeha eo anelanelan'ny fotoana sy refy handresena ny ozona taloha ary hamonjy ny rehetra fanahin'ny tsy manan-tsiny. Ho an'ity dia mila manampy azy ireo hamaha ireo piozila samihafa isika rehefa mizaha tontolo iray very fanahy sy matoatoa very.
1 Endri-javatra ny mpandeha fanahy: fanozonana ny mpamosavy Cypress
2 Andininy ho an'ny mpandeha fanahy: fanozonana ny mpamosavy Cypress
3 Mpandeha fanahy: ny fanozonana amin'ny mpamosavy Cypress ho an'ny iPad:
4 Mpandeha fanahy: ny fanozonana amin'ny mpamosavy Cypress ho an'ny iPhone sy iPod Touch:
Endri-javatra ny mpandeha fanahy: fanozonana ny mpamosavy Cypress
Mandritra ny lalao dia mila mandresy ireo seho mahatalanjona 32 miaraka amin'ireo zavatra miafina marobe isika.
20 no piozila izay ho hitantsika eny an-dàlana mankany amin'ny famonjena.
Ny sary 3D, misy amin'ity lalao ity, dia manolotra atmosfera mahavariana sy mahatsikaiky.
Andininy ho an'ny mpandeha fanahy: fanozonana ny mpamosavy Cypress
Hita amin'ny teny espaniola ary koa anglisy, frantsay, alemanina, portogey, rosiana, koreana ...
Mitaky macOS 10.9 na taty aoriana.
Atoro ho an'ny 9 taona sy miakatra.spi
Ity lalao ity dia azo alaina ao amin'ny kinova ho an'ny iPhone sy iPad ihany koa.
Mpandeha fanahy: ny fanozonana amin'ny mpamosavy Cypress ho an'ny iPad:
Mpandeha fanahy: ny fanozonana amin'ny mpamosavy Cypress ho an'ny iPhone sy iPod Touch:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Mpandeha fanahy: fanozonana ny mpamosavy Cypress, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Maninona aho no tsy afaka mametraka ny teny miafiko ao amin'ny app Terminal
Apple dia miditra amin'ny varotra fizarana fizarana Toshiba